नायक पल शाहले देख्न सके’नन् पहिरो पिडित’को आँसु, पीडित’लाई राहात लिएर पुगे बागलुङ..हेर्नुहोस्..
September 8, 2020 1852
पछिल्लो पुस्ता’का बहुचर्चित अभिनेता हुन् पल शाह । ने’पालमा कोरोना कहरको सुरु’वातसँगै अभि’नेता पलले अन्य कलाकारहरुको भन्दा फरक छवि देखाए । उनले फिल्मको छायां’कन नभएको समय’मा नै समाज’सेवा सुरु गरे ।
कोरोना संक्र’मणको समयमा खान’पान समेत वितरण गरेका पलले पछिल्ला दिनमा प्राकृतिक प्रकोपका पिडित’हरुलाई पनि सहयोग लिएर गाउँ गाउँमा पुग्न थाले’का छन् ।
बाढी पहिरो’बाट पी’डित बनेका उनीहरुलाई पल शाहस’हितको टीमले राहत प्रदान गर्न लागेको बताइएको छ । आज बिहान काठमाडौंबाट हिँ’डेको पल साहको सहयोगी टिम भोलि बुध’बार मात्रै पहिरो गएको स्थानमा पुग्ने बता’इन्छ ।
पलको टिमले करिब ३० देखि ४० परिवार’लाई प्रति परिवार एक बोरा चामल, नुन, तेल दाललगा’यतका खाद्या’न्न प्रदान गर्ने तयारी गरेको बताइन्छ । पल शाह प्रतिष्ठान, हाम्रो टिम नेपाल र दुर्गेश थापाको समूहले सो राहत प्रदान गर्न लागेको हो ।
यही भदौ १७ गते बुधबार बाग्लु’ङको ढोरपाटन नगरपालिकामा गएको सो बाढी पहिरोमा परेर ज्या’न गुमा’एका १४ जनाको श व पहिचान भएको छ भने अझै करिब २ दर्जन सर्वसा’धारण बेपत्ता भइरहेको र उनीहरुको खो’जीकार्य भइरहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै यसअघि नाय’क पल शाहको टिमले कालि’कोट पुगेर पहिरो प्रभावितलाई सहयोग वितरण गरेका थिए । हाम्रो टिम नेपाल र पल शाह प्रतिष्ठानको सह’कार्यमा पहिरो पिडि’तलाई सहयोग गर्न त पल शाह काठमाडौंबाट कालिकोट पुगेर त्यहाँका ४० परिवार पहि’रो प्रभावि’तलाई खाद्यान्न, बिस्तरा लगाय’तको सह’योग वितरण गरेको छ ।
नायक पल शाहले कालि’कोट यात्रा क्र’ममा बाटोमा आफैंले खाना पकाएर खाएका तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा सार्व’जनिक गरेका थिए । बाढी पहिरोका कारण यात्रा कष्ट’कर भए पनि कालि’कोटको पिडा महसुस गरेर स’हयोग गर्न पुगेको बताए । कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पहिरो जाँदा ठूलो जनधनको क्ष’ति भएको थियो । – ओ एस नेपालबाट
Prevनेपालीले गरे साउदीमा ठूलो प्रदर्शन, कारण यस्तो छ ! (भिडियो हेर्नुहोस)
Nextआज भदौ २४ गते बुधबारको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कति पर्छ तोलाको ? हेर्नुहोस्
विवादपछि पहिलोपटक मिडियामा गायिका समीक्षा अधिकारी (हेर्नु`स भिडियो)